Roasting Pan တစ်ခုအစားမည်သည့်အရာကိုသုံးရမည်နည်း။ - သိကောင်းစရာများနှင့် Great Ideas!
မြေသားအမဲသားနှင့်အနက်ရောင် bean burrito စာရွက်
သဘာဝအဖြန့်ချိ vs ချက်ချင်းအိုးအမြန်လွှတ်ပေးရန်
မင်းကချက်ပြုတ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိလား ဒယ်အိုး - သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းလိုအပ်နေ? ဒီကင်မရာကကင်မရာကောင်းကောင်းလုပ်တာ၊ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးတွေသုံးတာတွေ၊ သင်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီလမ်းညွှန်နဲ့အတူလိုက်နာပါ။
လှော်အိုးများသည်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်းမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒီမီးဖိုချောင်အပေါ်တစ် ဦး အမြန်သင်ခန်းစာပါပဲ။
အပူပေးဒယ်အိုးသည်ကြီးမားသော၊ တဖက်သတ်ဒယ်အိုးဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောထိန်သိမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဖဲကြိုးအောက်ခြေနှင့်လက်ကိုင်များပါရှိသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်ဟာမီးဖိုထဲကတူရကီတစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်အသားကြီးတွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်မယ်ဆိုရင်သင်လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုလိုတယ်။
ကောင်းသောမီးဖိုကောင်းကိုအပူဖြန့်ဝေရန်အတွက်သံမဏိသို့မဟုတ်အလူမီနီယမ်မှပြုလုပ်သည်။ အသားနှင့်ချွေးပေါက်များမှခွဲထုတ်ရန်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အောက်ခြေဖဲကြိုးများ။ မီးဖိုထဲနှင့်ထိုအပူရှိန်ပြင်းသောကြက်ဆင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြံ့ခိုင်။ လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်နိုင်သောလက်ကိုင်များကိုရှာဖွေပါ။
ကင်ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အပူနှင့်အပူကိုချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပတွင်အဆီအလွှာရှိသောအသားများနှင့်ကြက်၊ လှော်သည်အတွင်းပိုင်းတွင်အစိုစွတ်။ အရည်ရွှမ်းသောအသားများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤအပြင်ဘက်အလွှာသည်ဖျော်ရည်များတွင်တံဆိပ်ခတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်သင်အပူခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုစိတ်ထဲထားကာဒယ်အိုးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
နက်ရှိုင်းသောဘက်တစ်ချက်စီလှော်ထားသောဒယ်အိုးသည်မြက်များသို့မဟုတ်အသားများအတွက်အမြောက်အများကိုညှစ်။ အမြစ်ထွက်စေသည်။ က ရေတိမ်ပိုင်းကင်ဒယ်အိုး ပိုမိုတိုတောင်းသောနှစ်ဖက်ရှိပြီးနှင့်သင့်လျော်သည် အာလူးဖုတ် , ငါး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသို့မဟုတ်သူတို့ကင်အဖြစ်ဖျော်ရည်အများကြီးထုတ်လုပ်ရန်မည်မဟုတ်ကြောင်းအခြားအစားအစာများ။
တချို့ကကင်အိုးများနှင့်အတူပါရှိသည်။ ဤသည်ကဒယ်အိုးကို ပိုမို၍ ဘက်စုံသုံးအသုံးပြုမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည် အချစ် ဒါမှမဟုတ်အိုးကင်။ ရုံမှားယွင်းတဲ့အဖုံးကင်များအတွက်ကြောင်းမထင်ကြဘူး။ အမဲသားသည်အသားကင်။ မခြောက်နိုင်၊ ခြောက်သွေ့။ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဖုံးနှင့်အတူချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းသောစျေးကြီးသည့်ကင်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အညိုရောင်လွန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင်အသားကိုလူမီနီယံသတ္တုပါးနဲ့ဆောက်လို့ရပါတယ်။
ဒယ်အိုးမရှိဘူးလား။ ခြောက်သွေ့သောအပူ - ကင်လှန်ရန်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသတိရပါ။ သင်၏အသားများကိုဒယ်အိုးထဲသို့မညှစ်လို။ ဒယ်အိုး၏ဘေးနှစ်ဖက်ကိုထိလျှင်သို့မဟုတ်အောက်ခြေတွင်ကျသည်။
a ကိုသုံးပါ high-sided casserole ပန်းကန် တပ်ဆင်ထားသည် ထိန်သိမ်း နှင့်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရ။
TO သို့ ဖုတ်စာရွက်အနားကွပ်
ပြီးတော့ဒါကအသားလေး၊ လေးလံနေရင်၊ မသုံးပါနဲ့ သူတို့အား တစ်ခါသုံး 'ကင်' အိုး ။ ၄ င်းတို့သည်ပေါ့ပါးလွန်းပြီးအပူကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ပိုဆိုးတာကသင်ဟာသင့်ရဲ့မီးဖိုထဲကသင့်ကင်ဖယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ကိုင်တွယ်ရန်လုံးဝအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် ကင် သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းအပိုင်းအစအတွက်ကြက်ဆင် trussed ။
အာလူးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများလည်းပါ ၀ င်သည်။
သင်တစ် ဦး ထိန်သိမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပါ သင်၏အသားများကိုအရည်များမှထုတ်ယူနိုင်ရန်သတ္တုပါးဘောလုံး (သို့) မုန်လာဥ / ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ကြက်သွန်နီများကိုသုံးပါ။
လှော်သို့မဟုတ်ကြက်ဆင်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ထိန်သိမ်းကိုဖယ်ရှားပြီးလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်မှုအတွက် deglazing အတွက်ဒယ်အိုးအားမီးဖိုပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပါ။ ဟင်းရည် ။
Nonstick ထိန်သိမ်းနှင့်အတူ Calphalon ဂန္ထဝင် 16 လက်မကင် Pan
စျေးနှုန်း: $ 65.99 - အမေဇုံအပေါ် Cephalon
Granite Ware 18 O ဘဲဥပုံကင် Pan
စျေးနှုန်း: $ 29,99 - အမေဇုံအပေါ်ကျောက် Ware
အခက်ခဲဆုံးမီးဖိုချောင်အိမ်မှုကိစ္စများအနက်တစ်ခုမှာဖုတ်ထားသည့်အမဲဆီနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဒီမနှစ်မြို့တဲ့အလုပ်အတွက်ကလေးကပိုကင်တာပဲ။ တံတောင်ဆစ်အမဲဆီကိုဖြတ်တောက်ရန်အကြံပြုချက်များစွာရှိသည်။
Stovetop burner, water, နှင့် metal whisk (သို့) သစ်သားတံတွေး - မီးဖိုထဲသို့ရေတစ်လက်မထည့်ပြီးမီးဖိုပေါ်ပြုတ်ပါ။ ဖုတ်ထားသောနံရံများကိုဒယ်အိုးအားဖြင့်ခြစ်ပါ။ ၎င်းသည်အဆိုးဆုံးအစက်အပြောက်များရရှိရန်အတွက်ထိရောက်သော်လည်းသင့်အားရေမရောက်ရှိနိုင်သောဒယ်အိုးထိပ်များမှအမဲဆီနှင့်သင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Bon Ami အမှုန့်သန့်စင်ဆေးရည် နှင့်ပွန်းပဲ့နိုင်သည့်ပါတနာ - သင်၏စုပ်စက်နှင့်ရေချိုးကန်အတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ခြစ်ရာမဟုတ်သောသန့်စင်စက်ကိုသင်၏အိုးများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာ Non- အဆိပ်, ထိရောက်သောနှင့်ခြစ်ရာမထားဘူး။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ခေါင်းမာသောအစက်အပြောက်များကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့် Stick မဟုတ်သောဒယ်အိုးအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရှိသည်မဟုတ်ပေမယ့်သင်ပို။ ပင်ပါဝါများအတွက်ပွန်းစားအမှုန့်သန့်စင်စက်ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုပါစို့။
မီးဖိုသန့်ရှင်းရေး နှင့်အလူမီနီယံသတ္တုပါးတက် wadded - ငါသာခိုင်ခံ့သံမဏိပေါ်မှာဤကိုသာသုံး, နှင့်အပြင်မှာငါ့အအိုးများအပြင်ဘက်သယ်ဆောင်များအတွက်ရာသီဥတုရဲ့ ok အခါ။ ငါသည်ငါ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာကြမ်းတမ်းသောဓာတုပစ္စည်းများပက်ဖြန်းမကြိုက်ဘူး။ ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်အခြေအနေတိုင်းအတွက်အသုံးမကျပေ။
ဆိုဒါနှင့်ရှာလကာရည်မုန့်ဖုတ် - ဤသူသည်ငါသေးကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်တ ဦး တည်း, ဒါပေမယ့်ငါကအားလုံးကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့မြင်နှင့်ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုတ ဦး တည်းသွားကြဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျိန်ဆိုသူများသည်ဒယ်အိုးကိုမုန့်ဖုတ်သည့်ဆိုဒါနှင့်ရောစွာဖြန်းခြင်း၊ ထို့နောက်ရှလကာရည်ထည့်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းမပြုမီစုပ်ယူရန်အကြံပြုသည်။